Diyaarinta xalka | December 2019
Usneya waa la daboolay: sifooyinka nafsadda ee lichen
Editor Ee Doorashada December 8,2019
Ugu Weyn Ee Diyaarinta xalka
Isku darka Bordeaux: Mabda'a hawlgalka, diyaarinta iyo tilmaamaha isticmaalka
Bordeaux isku dar ah ayaa magaceeda ku helay meeshii ay abuurtay - magaalada Bordeaux. Faransiiska, dareerahan ayaa si guul leh loo isticmaalay tan iyo qarnigii 19aad. Isku darka Bordeaux waxaa lagu diyaarin karaa adiga. Maqaalkani, waxaad baran doontaa sida loo sameeyo sidan, sida loola dhaqmo Bordeaux isku dar ah, hababka codsigeeda iyo tallaabooyinka amniga.
Lespedetsa - warshad caafimaad: sharax, isticmaalid iyo beerista guriga
Sidee waxtar leh stevia macenta
Dhirta sare leh daryeelka ugu yar waxay siin doontaa canab
Kufsiga ukumaha dufanka: qaababka habka, qaladka cusub ee qaladka ah
Maxay tahay isticmaalka feijoa jirka haweenka?
Jikada yaryar ee Japan
Qufac qolof qalalan
Beerista gabal gabal ah guga
Tamaandho noocyo ah Ural
Raspberry caadiga ah
Koraaya strawberries ee lagu koriyo ah
Hawthorn waa hab fiican oo lagu yareyn karo walaaca. Kufsi yar oo berry ah oo lagu shubo shaaha aad jeceshahay, waxaad dareemi doontaa nasasho dhamaystiran iyo isku dhafka tamarta. Sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad xasuusato in haweenku tahay antiseptic dabiiciga ah. Neefsashada murqaha waa caawiyaha ugu fiican. Read More
Kuleylka kulaylka ah - jiil cusub oo khudradeed
Qulqulka compost: xulashada goobta iyo fursadaha soo saaridda dhismayaasha
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Diyaarinta xalka 2019